ATSAHARO NY EFIJERY LOCK AMIN'NY WINDOWS 10 [GUIDE] - MALEMY
Atsaharo ny efijery Lock amin'ny Windows 10 [GUIDE]
Windows Lock Screen dia naseho tao amin'ny Windows 8; tafiditra ao anatin'ny kinova Windows rehetra izy io, na Windows 8.1 na Windows 10. Ny olana eto dia ny endri-javatra Lock Screen ampiasaina amin'ny Windows 8 dia natao ho an'ny PC touchscreen fa ny PC tsy mikasika ny finday dia mety nandany fotoana io fampiasa io satria tsy misy dikany ny fikitihana ity efijery ity dia avy eo tonga ny safidy fidirana. Raha ny marina, efijery fanampiny izay tsy manao na inona na inona; fa kosa, ny mpampiasa dia te-hahita mivantana ny efijery fanaovana sonia rehefa manafika ny solosainy izy ireo na rehefa mifoha amin'ny torimasony aza ny PC.
Ny ankamaroan'ny fotoana ny Lock Screen dia sakana tsy ilaina fotsiny izay tsy mamela ny mpampiasa hiditra mivantana. Ary koa, mimenomenona ireo mpampiasa fa indraindray tsy afaka mampiditra ny teny miafina mety izy ireo noho io endri-javatra Lock Screen io. Tsara kokoa ny manafoana ny endri-javatra Lock Screen ao amin'ny Windows 10 amin'ny Settings izay hampiakatra haingana ny fizotran'ny fidirana. Saingy tsy misy safidy na endri-javatra toy izany amin'ny fampandehanana ny efijery hidin-trano.
Na dia tsy nanome safidy namboarina aza i Microsoft mba hanajanonana ny efijery hidin-trano, saingy tsy afaka manakana ny mpampiasa tsy hanajanonana azy ireo amin'ny alàlan'ny hacks isan-karazany izy ireo. Ary anio dia hiresaka momba ireo torohevitra sy tetika isan-karazany izay hanampy anao amin'izany asa izany izahay. Ka raha tsy mandany fotoana dia andao jerena ny fomba hanafoanana ny efijery Lock amin'ny Windows 10 miaraka amin'ny fanampian'ny torolàlana etsy ambany.
Fomba 1: Atsaharo ny Lock Screen amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratry ny vondrona politika
Fomba 2: Atsaharo ny Lock Screen amin'ny alàlan'ny Editor Registry
Fomba 3: Atsaharo ny efijery fanidiana amin'ny alàlan'ny Task scheduler
Fomba 4: Alefaso ny fidirana mandeha ho azy ao amin'ny Windows 10
Fanamarihana: Ity fomba ity dia tsy mety amin'ireo mpampiasa manana Windows Edition an'ny Windows; tsy miasa afa-tsy amin'ny Windows Pro Edition.
1. Tsindrio ny Windows Key + R dia soraty gpedit.msc ary tsindrio Enter raha hanokatra ny Group Policy Editor.
2. Ankehitriny mivezivezy mankamin'ity làlana manaraka ity amin'ny gpedit ao amin'ny biraon'ny varavarankely ankavia:
Fanamboarana solosaina> Modely fitantanana> Panel fanaraha-maso> Personalization
3. Raha vantany vao nahatratra ny personalization ianao, kitiho roa amin'ny Aza aseho ny efijery hidin-trano s etting avy eo amin'ny baravarankely ankavanana.
google chrome dia nijanona tsy niasa tamin'ny windows 10
4. To disable the lock screen, zahao ny boaty misy ny boaty misy ny marika hoe Enified.
5. Kitiho ny Ampiharo, arahin'ny OK.
6. Mety izany Atsaharo ny efijery Lock amin'ny Windows 10 ho an'ny mpampiasa Pro Edition, hahitana ny fomba hanaovana an'io amin'ny Windows Home Edition araho ny fomba manaraka.
Fanamarihana: Aorian'ny Windows 10 Annivers Update dia toa tsy mandeha intsony ity fomba ity, fa afaka mandroso & manandrana. Raha tsy nety ho anao izany dia mandehana amin'ny fomba manaraka.
1. Tsindrio ny Windows Key + R dia soraty regedit ary tsindrio Enter raha hanokatra Registry Editor.
2. Mizaha mankany amin'ireto lakilen'ny fisoratana anarana manaraka ireto:
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Politika Microsoft Windows Personalization
3. Raha tsy hitanao ny fanalahidy Personalization dia kitiho ny bokotra havanana am-baravarankely ary safidio Vaovao> lakile.
4. Lazao hoe Personalization ary avy eo manohy.
5. Ankehitriny tsindrio havanana amin'ny Personalization ary safidio Sanda vaovao> DWORD (32-bit).
6. Omeo anarana hoe DWORD vaovao ity ho NoLockScreen ary tsindrio indroa eo aminy hanovana ny sandany.
7. Ao amin'ny sehatry ny angona Value, alao antoka fa miditra 1 ary tsindrio OK.
8. Atsaharo indray ny PC-nao raha te hitahiry fanovana, ary tsy tokony hahita ny Windows Lock Screen intsony ianao.
Fanamarihana: Ity fomba ity dia tsy mampandeha ny efijery hidin-trano amin'ny Windows 10 rehefa manidy ny PC-nao ianao, midika izany fa rehefa manamboatra ny PC-nao ianao dia mbola hahita ny efijery hidin-trano.
1. Tsindrio ny Windows Key + R dia soraty Taskschd.msc ary tsindrio Enter raha hanokatra Mpandahatra lahasa.
2. Avy eo, avy amin'ny fizarana Actions avy eo ankavanana ankavanana, kitiho Mamorona Task.
3. Ankehitriny ataovy izay hahazoana antoka fa hanome anarana ny Task ho Atsaharo ny efijery Lock Windows.
4. Manaraka, alao antoka Mihazakazaha manana tombony lehibe Safidy voamarina ambany.
5. Avy Configure ho an'ny fidio-midina mifidy Windows 10.
6. Mifamadiha amin'ny Trigger tab ary tsindrio eo Vaovao.
7. Avy amin'ny Atombohy ilay asa fidio-midina fidio Rehefa hiditra.
8. Izay no izy, aza manova zavatra hafa ary tsindrio OK raha ampiana an'ity farany.
9. Kitiho indray Vaovao avy amin'ny tabilao triggers ary safidio ny Start the task dropdown amin'ny fidirana amin'ny workstation ho an'ny mpampiasa rehetra ary tsindrio OK raha ampiana ity trompetra ity.
10. Ankehitriny mifindra amin'ny kiheba Action ary tsindrio ny bokotra vaovao.
11. Tazomy Manomboha programa eo ambanin'ny Action dropdown tahaka azy ary eo ambanin'ny Program / Script add reg.
12. Eo ambanin'ny Add arguments saha dia ampio ity manaraka ity:
ampio HKLM SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Fanamarinana LogonUI SessionData / t REG_DWORD / v AllowLockScreen / d 0 / f
13. Kitiho ok hamonjy ity Hetsika vaovao ity.
14. Ankehitriny vonjeo ity Task ity ary avereno ny PC-nao mba hitahiry ireo fanovana.
Hahomby izany Atsaharo ny efijery Lock amin'ny Windows 10 fa ny miditra ho azy eo amin'ny Windows 10 dia araho ny fomba manaraka.
Fanamarihana: Izy io dia handingana ny efijery Lock sy ny efijery Sign-in ary tsy hangataka akory ny teny miafinao satria hiditra azy ho azy avy eo ary hampiditra anao amin'ny PC-nao. Noho izany dia mety hitranga izy io, alao antoka fa hampiasa an'io raha manana PC-nao any amin'ny toerana azo antoka sy azo antoka. Raha tsy izany dia mety afaka miditra mora foana amin'ny rafitrao ny hafa.
1. Tsindrio ny Windows Key + R dia soraty netplwiz ary tsindrio Enter.
2. Safidio ny kaonty mpampiasa te-hiditra ho azy miaraka aminao, esory ny Ireo mpampiasa dia tsy maintsy mampiditra anaran'ny mpampiasa sy teny miafina hampiasa ity solosaina ity safidy.
3. Kitiho ny Ampiharo, arahin'ny OK.
Efatra. Ampidiro ny tenimiafinao kaonty mpandrindra ary tsindrio OK.
5. Atsaharo indray ny PC-nao fa hiditra ao amin'ny Windows ianao.
Amboary ERR_QUIC_PROTOCOL_ERROR ao amin'ny Chrome
Amboary ny Hmm, tsy afaka mahatratra ity lesoka pejy ity izahay amin'ny Microsoft Edge
Ahoana ny fomba hanamboarana ERR_NETWORK_CHANGED ao amin'ny Chrome
Amboary ny ERR_INTERNET_DISCONNected ao amin'ny Chrome
Izay no nahombiazanao Atsaharo ny efijery Lock amin'ny Windows 10 fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity lahatsoratra ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
microsoft edge tsy mandeha windows 10
Windows 10 dia mangatsiaka amin'ny efijery fandraisana
Windows 10 mamerina manamboatra ny fanavaozana ny windows
nvidia geforce traikefa tsy hanokatra windows 10
atombohy ny menio windows 10 manamboatra lesoka fanakianana
mpamily irql tsy kely na mitovy fanarenana